Author: Fem Todal
Inni gamtaa Tokkummaa sadan Waaqummaa Abbaa Isaa fi Hafuura Qulqulluu wajjin qullqulluu keessaa isa tokko ta’ee hafe, akkasumas immoo guutummaan guutuutti bakka hundattii argamuu, waan hunda beekuu fi waan hunda danda’uu irraa gonkumaa hin dhaabatu. Inni namoota amantiidhaan bulanii fedha isaa qabaniif hafuuraa in raabsa: Waaqayyo quqlulloota Kakuu Moofaa fi yeroo Gidiraa Guddaatti du’an hunda du’aa in kaasa Isaayyaas Duulli hedduun Macaafa Qulqulluu irratti taasifamaa turaniiru.
Kunis wangeela Luuqaas boqonnaa tokko irratti Gabreel qulqulluun ji’a ja’affa irratti gara durbee Maariyaam ishee dhiira hinbeekne ergamee deeme jedha.
Hojiin ergamummaa wangeelaa akka itti fufuu fi gara naannoowwan gararraatti akka erguuf Waaqayyo dhiiraaf dubartii ciccimoo, jajjaboo fi ogeessota haa kaasu.
Ilaalchi Dhalchuu Ilmaa dabalataanis Yohaannis 1: The Deity of the Messiah. Warri mishinerii fi Onesmoosis ummata wangeela barsiisuu, dhukkubsataa yaaluu, fi dargaggoota mana barumsaa keessatti barnoota barsiisuu itti fufan. Ergamaan Jihoovaa, xfaan, Kiristoos bara-baraa Mataa Isaa ture. The Local Church, p. Now a days, almost everybody uses mobile devices to read the bible.
Qorattoonni sirna uumamaa akka jedhatti, jijjiiramni suuta-suutaa waggootta miiliyoonota hedduu gaafata, akka caaffataatti garuu, Waaqayyoo ifumatti yeroo gabaabduu, guyyuma sa’aatii diigdamii afurii keessatti Addaam Uume, Uma.
Inni mataa waldaa kiristaanaati. Waaqayyo yeroo Gidiraa kanatti kaayyoowwan gurguddoo in raawwata: Ilmi bara-baraa foon namaatiin in dhalate Isaayyaas 9: Mootii Baabiloon Isaayyaas Inni qajeelfama biyya lafaa jal’aa fi kanneen Kiristoos akka fayyisaa isaanitti fudhachuu didan hunda in barbadeessa Isaayyaas Macaaca Kiristaanni Seexana Wajjin Qabu. Sababni isaas waan akka geengoo tookko irratti tuqaa kam irraa jalqabne lakkoofna akka jechuutii.
Ani siif Waaqayyo ta’ee, si booddeedhaanis sanyii keetiif Waaqayyo ta’uuf kakuu koo ofii koo fi si gidduutti dhaloota si booddee jiran, sanyii isaanii hundumaa gidduuttis kakuu bara-baraa godhee, cimsee nan dhaaba. Inni yeroo ammaa kanatti teessoo Waaqayyoo duratti qulqulloota Waaqayyoon walitti araarsaa jira.
Qo’annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin. Kiristaanni haleellaa seexnaatiif akkamitti deebii kennuu akka qabu: Garuu Minilik II mishinariin biyya alaa kamiyyuu biyya keessa akka hin seenne waan dhorkeef karaa Sudaan Wallagga seenuuf yaali godhe. Afaan Oromo Bible Macaafa Qulqulluu is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God.
Akka sagalee abdii kennameetti Waaqayyo warra fayyaniif karoora milkaa’uu danda’u warra hin fayyineef immoo akeekkachiisa, akkasumas immoo hundumaafuu haqafi araara isaa qopheesseera. Kana hubannaa keessa galchuudhaan karaa Tokkumma Woldootii Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbisoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiheessinu gammachuu guddaatu nutti dhaga’ama; dubistanii akka itti eebbifamtanis orommoo qabna!
Filannoon Isiraa’el kophumatti kan Waaqayyooti.
Waaqayyo biyyoota Isiraa’eloonni keessaitti faca’anii jiranii ofomoo Biyya abdachiifamteefi iddoo isaan itti daangaa ishee guutuudhaan gammachuu safara hin qabneen keessa jiraatanitti deebisee walitti isaan in qaba. Dhiiga mataa Isaatiin lubbuu namaatiif abaarsa Waaqayyoo fudhatee cubbuu keenya irraa nu furuudhaan Inni Furaa dhala namaati. Waaqayyo, akkasitti tokkicha Ilma Isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate, kun immoo Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara-baraa haa qabaataniif malee, haa baduuf miti.
Seexannii fi ergamoonni isaa hundinuu gara Galaana Abiddaa isa bara-baraaf oromooo in darbatamu Maatewos Kanneen amanan deebisee in dhaabe Yoh. Dhagnoonni sadan tokkumma, akkasumas immoo amalli addaa tokko-tokkoon isaanii qaban inni ijoon Hafuura Waaqayummaati. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira, Innis Abbaa Isa waan hundumaa uume, Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannusi.
Read and study multiple Bible translations, books and brochures. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma.